WINSCAN2PDF 4.19 NA-ENWETA N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
Enwere ndị ọrụ, nke kachasị, ghọtara ịdị mfe na nkwekọrịta nke ịrụ ọrụ na mmemme. Iji rụọ ọrụ a kapịrị ọnụ, ha na-ahọrọ ọrụ ndị a na-eji eme ihe pụrụ iche, ndị na-ahụkarị, kama ijikọta ọtụtụ ọrụ. Ma, enwere ngwa ndị dị otú ahụ iji nyochaa ngwa ngwa na digitizing ederede na PDF?
Ihe ngwọta kachasị mfe na ọrụ a bụ Vinscan2PDFonye ọrụ ya dị mfe ma kwụ ọtọ dị ka o kwere mee.
Anyị na-akwado ịhụ: mmemme ndị ọzọ maka mmuta ederede
Na ịpị na bọtịnụ mbụ "Họrọ Iyi", windo na-egosi ebe e nwere ndepụta nke ngwaọrụ ejikọrọ. Họrọ nyocha ahụ kwesịrị ekwesị, pịa "Iṅomi".
Na etiti e gosipụtara, dee ụzọ ị zọpụta.
Ntụle dị mfe
Ọ dabara ma ọ bụ dị mwute, ịchọta ihe oyiyi na PDF bụ naanị ọrụ nke usoro a. WinScan2PDF nwere ike ime nke a na ntinye click sour, nyocha na ntinye ederede n'ime faịlụ PDF.
Mgbe ịgụ isiokwu, ọ ga-ekwe omume ịtọ ụdị ụdị oyiyi (agba, nwa na ọcha), họrọ ụdị onyinyo a, yana àgwà oyiyi.
Tụkwasị na nke ahụ, ngwa ahụ nwere ike iji ọnọdụ nyochaa multi-peeji nke. Ọ na-enye gị ohere 'ichikota' onye ọ bụla ghọtara ihe oyiyi n'ime otu PDF faịlụ. Nke a na-emekwa n'ọnọdụ akpaka.
Oke mfe nke ọrụ;
Ngwa ahụ anaghị achọ nkwụnye na kọmputa.
Enweghị ọrụ ndị ọzọ;
Nkwado maka ichekwa otu uzo faịlụ (PDF);
Naghị arụ ọrụ na ụdị nyocha ọ bụla;
Enweghị ike ịkọwapụta ihe oyiyi site na faịlụ.
Ejiri Vinscan2PDF maka ndị na-aghọta ihe dị mfe ma dị ntakịrị nke ndị ọrụ, ndị ọrụ ha gụnyere nanị nyocha na digitizing ederede na PDF. Ịrụ ọrụ ọ bụla ọzọ ga-achọ ihe omume ọzọ.
Download WinScan2PDF maka n'efu
Nchịkọta akụkọ nyocha VueScan Scanlite Ridioc
WinScan2PDF bụ ngwa ngwa maka ịchọta akwụkwọ na iji nyocha ọ bụla jikọtara na kọmputa.
Onye Mmepụta: Nenad Hrg